कपिलवस्तुमा कहाँ कस्ले जिते ? - Lumbini Times
कपिलवस्तुमा कहाँ कस्ले जिते ?
209 views | लुम्बिनी टाइम्स | बिहीवार,२२ असार ।
कपिलवस्तु । दश स्थानीय तह रहेको कपिलबस्तुका सबै तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । कपिलबस्तुको वाणगंगा, बुद्धभूमि, कपिलबस्तु, महाराजगञ्ज नगरपालिका र यशोधरा गाउपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको छ ।
यस्तै शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिका एमालेले तथा मायादेवी गाउपालिका संघिय समाजबादी फोरम, सोद्धोधन र कृष्णनगर गाउपालिका स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।
यस्तै कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा कांग्रेसका अब्दुल कलाम खाँ ७ हजार ७२४ मत सहित विजयी हुनुभएको हो । निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवार दीर्घ नारायण पाण्डेले ६ हजार ७ सय ४५ मत पाउनुभयो । त्यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसकै शोभावती कुर्मी ६ हजार १३ मत सहित विजयी हुनुभएको छ ।
स्वतन्त्रका उम्मेदवार जीवन कुमार कुर्मीले ३ हजार ६४ मत मात्र पाउनुभयो । कपिवलबस्त’को बाणगंगा र कपिलवस्त’ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस बिजयी भएको छ . पछिल्लो घोषित परिणाम अन’सार कपिलवस्तु नगरपालीकामा कांग्रेस उम्मेदवार किरण सिंह मेयरमा बिजयी हुनु भएको छ ।
यस्तै बाणगंगामा पनि कांग्रेसका मंगल थारु बिजयी हुनु भएको छ । उपप्रमुखमा भने एमाले उममेदवार बिजयी भएका छन ।
यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका केशव श्रेष्ठ बिजयी हुनु भएको छ उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस कै मिरा चौधरी बिजयी हुनु भएको छ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेवार रजत प्रताप साह विजयी हुनुभएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार रजत प्रताप साह ७ हजार १ सय २३ मत प्राप्त गरी मेयरमा विजयी हुनुभएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिव प्रसाद जयसवालले ३ हजार २ सय ५ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शबनम खातुन ३ हजार १ सय ५५ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ ।